A na-emelite Spotify ma dakọtara na Ogwe aka nke ọhụrụ Macbook Pro | Esi m mac
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Noticias, Ngwa ndị ọzọ maka Mac, ọtụtụ
Nke nta, ngwa ọ bụla bara uru nnu ya na-agbanwe maka Ogwe Mmetụta ọhụrụ. N'ihe banyere Spotify Ọ na-abịa ọnwa abụọ ka ahapụchara Apple ọhụrụ Macbook Pro. Ikekwe igbu oge a n'ihe metụtara ngwa ndị ọzọ bụ n'ihi ihe ga-ekwe omume malware achọtara na ngwa ahụ, dịka onye ọrụ ibe anyị bụ Ignacio Sala gwara anyị.
Taa, Spotify bụ onye ndu na egwu egwu, yana ihe karịrị nde 40 na-akwụ ụgwọ ndị ahịa. Imirikiti, ihe dị ka nde ndị ahịa 20, ka edebanyere atụmatụ plan 9,99 / ọnwa. N'ọnwa gara aga, anyị mụtara banyere omume Apple iji merie ndị ahịa n'elu ikpo okwu a, na-akwalite ntinye ego 50% nke ụmụ akwụkwọ.
N'ụzọ dị otú a, Spotify ugbu a nwere bọtịnụ ndị yiri nke iTunes gosipụtara na Ogwe aka. Site ugbu a gaa n'ihu, anyị nwere ike iji ntuziaka ndị na-ahụkarị nke ọkpụkpọ ọ bụla, dị ka: kpọọ, kwusi, gaa n'ihu, weghachi, ozugbo na ụlọ mmanya Apple ọhụrụ.
Mana ọ bụghị ọrụ niile nke ngwa ahụ na-enye anyị ịkwụsị ebe ahụ. Mmepe nwee site na Touch Bar, na o chọọ songs y gbanwee ọnọdụ egwuyana olu mgbanwe onwe ya n'etiti ngwa na olu sistemụ. Na mgbakwunye, ọ dịghị mkpa ka ngwa ahụ dị na mgbada, ebe ọ ga-ekwe omume ịnweta ntọala ọbụlagodi mgbe anyị na-eji mmemme ọzọ, mana anyị nwere Spotify na-agba ọsọ.
N'aka nke ọzọ, ndị na - ejide AirPods, na-enwe obi ụtọ na mmelite a. Ọfọn, ha na-etinye ọrụ ahụ auto-kwusi. Yabụ, ịme ngosipụta nke iwepu ekweisi Apple's AirPod ga-eme ka egwu ahụ kwụsị. Site n’itinye ha na nti, ọ ga-eme ka egwu anyị na-ege maliteghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Spotify na-emelite ma na-akwado Touch Bar nke ọhụrụ Macbook Pro
MP3 Music Ihe Ntụgharị, n'efu maka obere oge